Seychelles nasongadina tao amin'ny Reunion Senior Trade Fair
Home » Travel Associations News » Seychelles nasongadina tao amin'ny Reunion Senior Trade Fair
Ny tanjona dia nasongadina tamin'ny andiany faha-3 an'ny Réunion an'ny Senior Trade Fair niavaka natao tany La Réunion teo anelanelan'ny 31 Mey ka hatramin'ny 2 Jona 2019.
Ny fandraisan'anjaran'ny birao fizahan-tany any Seychelles (STB) amin'ny hetsiky ny mpanjifa 3 andro dia nifantoka tamin'ny fanamafisana an'i Seychelles ho toeram-pialan-tsasatra ho an'ny mpandeha vondrona. Ny hetsika, izay namory indray ireo mpirehareha miisa 100, ao anatin'izany ny manam-pahaizana manome serivisy amin'ny fialam-boly, fitsangatsanganana ary teknolojia eo ambanin'ny tafo iray, dia heverina ho hetsika lehibe ao La Réunion.
Ny foibe fivarotana zokinjokiny natao ho an'ny mpandeha antokon'olona - 50 no ho miakatra - dia mbola fotoana ahafahan'ny STB manatsara ny fisian'izy ireo amin'ny fampitomboana ny isan'ny mpizahatany tonga avy any amin'ny faritanin'i Réunion.
Nandritra ny fanatonan'izy ireo ny vahoaka La Réunion, ny STB sy i Thomas Cook dia tsy vitan'ny hoe niombon-kevitra marika hampiroborobo an'i Seychelles ho fialantsasatra fialantsasatra, ny mpiara-miombon'antoka Reunion Travel Trade dia nanolotra ny tolotra fampiroboroboana manokana ho an'i Seychelles. Ny fiasa amin'ny fampiroboroboana dia fonosana natao manokana ho an'ity mpizahatany ity.
Ankoatr'izay, i Thomas Cook dia niara-niasa tamin'ny orinasa Destination Management Company any Seychelles, Mason's Travel izay nanolotra 2 alina tao amin'ny Indian Ocean Lodge ary 2 alina tao amin'ny hotely Carana Beach tamin'ny fisarihana natao nandritra ny fiatoana 3 andro. Nanolotra loka hafa koa i Mason's Travel toy ny fitsangatsanganana sy famindrana.
Raha niresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fandraisana anjaran'ny STB amin'ny Senior Trade Fair, ny STB Senior Marketing Executive izay miorina ao La Réunion, dia nanambara Ramatoa Bernadette Honore ny isan'ny fandraisana anjara miavaka izay hanomezana fahitana bebe kokoa an'i Seychelles ho toerana iray azon'ny zotram-pizahan-tarika mitsangatsangana
"Ny fanamafisana ny fiaraha-miasa mitohy amin'i Thomas Cook amin'ity tsenambarotra fivarotana mpanjifa fanao isan-taona ity dia nanasongadina ny fanirian'ny matihanina mpivarotra Reunion Travel Trade hampitombo ity tsena fizarana ity any Seychelles. Ny zokiolona Reunion dia nitombo hatrany. Ny fitsangatsanganana koa dia iray amin'ireo fialamboly tian'izy ireo. Ny STB dia mikasa ny hanohy hiara-hiasa amin'ireo mpizahatany ao anaty vondrona amin'ny fialam-boly ahazoana antoka fa i Seychelles dia hisambotra ny ampahany amin'ity orinasa ity, "hoy Ramatoa Bernadette Honore.
Ny solontenan'ny STB dia nanonona ihany koa ny fisian'ny haino aman-jery manan-danja toa an'i Le Quotidien sy Reunion Première eo amin'ny fiantsonan'ny Seychelles izay manome fahitana misimisy kokoa amin'ny toerana haleha.
Raha ny angom-baovao voaangona isan-taona, 50 taona no ho miakatra dia anisan'ny iray amin'ireo mpizahatany mety hiala voly any La Réunion, izay maneho ny ampahefatry ny mponina La Réunion na olona manodidina ny 62,000.
British Airways dia namaly ny fangatahana sidina bebe kokoa avy any Italia mankany Etazonia
Ireo mpiara-miasa amin'i Seychelles dia mpiara-miasa vaovao miaraka amin'ny fitsipika eropeana vaovao